Prime Seed yosimudzira varimi | Kwayedza
Prime Seed yosimudzira varimi
09 Jun, 2017 - 00:06	 2017-06-08T10:53:07+00:00 2017-06-09T00:04:46+00:00 0 Views
KAMBANI ine mukurumbira wekuuchika mbeu yemiriwo yakasiyana yePrime Seed Co yodzidzisa zviuru nezviuru zvevarimi, vanamuzvinhabhizimisi nevadzidzi vekumakoreji ezvekurima kurima kwakanaka kunopa pundutso.
Kusvika parizvino kambani iyi yakatodzidzisa mapoka akasiyana evanhu vanodarika 3 000.
VaSilas Mutota vanove Sales Manager kuPrime Seed Co vanoti donzvo ravo nderekuti varimi varime mbesa dzemhando yepamusoro.
“Tine mbeu dzakawanda dzatinorima pano dzinosanganisira dzematomatisi, hanyanisi, eggplant, lettuce, orange maize, manhanga, manwiwa, muboora, mabhatanati nezvimwe zvakawanda.
“Tave nemakore maviri tichiuchika mbeu dzemiriwo yakasiyana dziri dzemhando yemapusoro.
“Donzo redu nderekuti varimi vange vachirima mbeu dzemhando yepamusoro dzinovapa goho rakapetwa,” vanodaro.
Kwayedza payakashanyira muzinda wePrime Seed Co kuStapleford muHarare svondo rapera yakawana vamwe varimi pamwe nevadzidzi vezvekurima vekuBlackfordby College of Agriculture iri kuConcession vachidzidziswa marimirwo embesa dzakasiyana.
VaMutota vanoti vanorima mbesa dzinosanganisira makabhichi, muriwo wemhando yerape, matomatisi nezvimwe izvo vanotengesa kuzvitoro zvikuru zvakatekeshera nenyika vachizviwanira mari zhinji.
“Dambudziko ratakaona kuvarimi nderekuti vamwe vanoramba vachishandisa mbeu dzekare-kare sekuti kana ari matomatisi vanoramba vachidyara avanenge vachiona kuti ave kuora pachinzvimbo chekuti vatenge mbeu kwadzo dzinokura dzichivapa goho guru.
“Pambeu dzekare murimi anogona kurima achiwana matani 20 000 ematomatisi pahekita imwe chete pachinzvimbo chekuti awane matani 120 000 kana achinge ashandisa mbeu kwadzo dzakauchikwa nePrime Seed Co,” vanodaro.
Vanoti kunyangwe kumisika zvirimwa zvinoburwa kubva pambeu dzavo zvinenge zviri zvemhando yepamusoro uye zvinotengwa nemakambani makuru.
Faith Dube anova regional sales and marketing agronomist kukambani imwe chete iyi anoti mbeu dzavo dzakauchikwa nenzira yekuti dzinokasika kumera dzichikura zvakanaka pasina kushandisa fetereza nemishonga yakawanda.
“Mbeu dzedu dzamaona kubvira pachibage chemhando yeOrange Maize iyo ine kudya kunodiwa nemuviri (fortified seed) dzakakosha zvikuru sezvo dzichibatsira mukurwisa zvirwere nekuderedza ndufu dzevana.
“Orange Maize iyo ine Variety yeZS242 ine Vitamin A inobatsira mukurwisa zvirwere zvikuru kuvana vanozvarwa uye inobereka miguri yechibage mitatu kana mina saka murumi anorima padiki achikohwa kakapetwa,” anodaro.
Mai Elizabeth Benjamini vanove regional sales agronomist kukambani iyi zvakare vanoti vanoshandisa nzira yedrip Irrigation mukudiridzira zvirimwa zvavo nekuti inoita kuti mwando unge uchigara muzvirimwa kwenguva ndefu.
“Tinoshandisa drip irrigation system nekuti iri nyore uye mwando unoenda pachirimwa chimwe nechimwe nekudaro tinochengetedza mvura yedu pane kuti inge ichirasika.
“Tinodzidzisa vanamuzvinapurazi, vadzidzi vemakorichi ezvekurima, varimi vadiki nevakuru nevamwe vakazvipira asi tichiita izvi pachena.
“Takaona kuti zvinobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika yedu pamwe nekuwaniswa mabasa kune veruzhinji zvichifambirana nechirongwa cheHurumende cheZim-Asset.
“Donzvo redu guru nderekuti nyika iite maguta gore negore. Tinokurudzira zvakare varimi kuti vasandure zvirimwa zvavanorima gore negore kuitira kuti ivhu ringe richiwana kudya kunokudza zvirimwa,” vanodaro.
Zvakadai, vamwe vadzidzi vekuBlackfordby College of Agriculture vanoti vanotenda zvikuru kambani yePrime Seed Co mukuwanisa ruzivo rwepachena urwo runovabatsira mudzidzo yavo.
“Tafara zvikuru nekudzidza kwataita nhasi nekuti tadzidza maringe nezvirimwa zvakasiyana kuti zvinorimwa nekuchengetedzwa sei.
“Izvi zvichatibatsira patinodzokera kuchikoro nekuti tinenge tava kufunda maererano nezvinhu zvatinenge taona nemeso edu,” anodaro Berlin Marizani (17) uyo ari mugore rekutanga pakoreji iyi.
Mashoko ake anotsinhirwa nemumwe mudzidzi, Lloyd Gwanzura (22), achiti vabereki vake vane purazi kuKaroi nekudaro anoda kuzoshandisa zvaari kudzidza mukusimudzira nyaya dzekurima papurazi iri.